Fifaninanana fanjifana solika : 1,85 litatra, lany amin’ny lalana 58,7 km | NewsMada
Fifaninanana fanjifana solika : 1,85 litatra, lany amin’ny lalana 58,7 km
Vita, ny alahady 6 aogositra teo, ny tena lalao famaranana farany tamin’ny fifaninanana nampanaovin’ny Vivo Energy, mpanjifa solika Shell, ho an’izay mahay mitsitsy solika indrindra. Famaranana nihaonan’ireo lohany avy eto Antananarivo, Toamasina ary Antsirabe, tafita tamin’ny fifanintsanana nisy teo amin’ireo tanàna ireo.
Traikefa vaovao nomena ireo mpifaninana ny hahitana izay tena mahay mitsitsy indrindra, ho an’ny mampiasa lasantsy na gazoala. Rehefa voasivana ireo mpandray anjara, nomena fiofanana amin’ny fahaiza-mitondra sy fisorohana ny loza, laharam-pahamehana ho an’ny Vivo Energy Madagascar.
Fiara Suzuki Jimny, noho ny fiaraha-miasa eo amin’ny Vivo Energy sy ny Sicam mpivarotra azy, ny nomena nampiasan’ireo mpifaninana. 50 km ny lalana nanaovana ny fifaninanana, ka izay tafavoaka mpandresy, nahay nitsitsy indrindra izany, loka voalohany ho azy ilay fiara Suzuki Jimny. Koa nahazo ny voalohany Razanamahenina Serge, avy eto Antananarivo, tsy nahalany solika afa-tsy 1,85 litatra tamin’ny halaviran-dalana 58,7 km.
Ho fitandroana ny tontolo iainana
Nampidirina eto Madagasikara voalohany ny solika Shell ny taona 2015. Araka ny fanadihadiana maro, afa-po amin’ny fampiasana azy ny mpanjifa. Mitovy maneran-tany ny kalitao amidy eto Madagasikara, atao indrindra ho fiarovana ny fiara sy fitandroana ny tontolo iainana. Efa fomba fanao any amin’ny firenena maro, indrindra any Eoropa, ny fifaninanana toy izao, izay efa mifantoka betsaka amin’ny fitandroana ny tontolo iainana.